Akụkọ - Zhejiang Sanmen Viair Industry
Ihe mkpuchi ụgbọ ala PVC
Kapeeti ụgbọ ala
Ọnụ ụzọ Mat
Ụlọ ọrụ Zhejiang Sanmen Viair Industry
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ ZHEJIANG SANMEN VIAIR INDUSTRY CO., LTD. tọrọ ntọala na August 1988. Anyị bụ ndị ọkachamara n'ichepụta ute ụgbọ ala ma ugbu a ghọọ otu n'ime ndị na-edugaute ụgbọ ala na ute ọnụ ụzọ ndị na-emepụta ihe na China. A na-ebupụ ngwaahịa anyị na ụwa niile, na isi ahịa bụ USA, Europe, Canada. anyị bụ ndị na-ebubata ụfọdụ ụdị ama ama, ụlọ ahịa na ndị na-ere ahịa dịka Wal-mart, COSTCO, HOMEDEPOT, ROSS, TARGET, AUTOZONE, DG, ALDI, LIDL, METRO, TESCO, Carrefour, Auchan, Michelin, Goodyear, Armor All, Dickies were gabazie. Viair gafere ISO 9001 International quality system certification, Site n'ịrụsi ọrụ ike nke ndị mmadụ Viair, ntụgharị ahịa anyị ruru nde dollar 32.
Anyị na-eguzobe anyị onwe anyị management otu ịchịkwa àgwà ka ndị kasị mma na iwekota akụrụngwa na kasị mma state.Every iji nwere ike na-azụ azụ na isi iyi na ebe nke ọ bụla ogbe nke raw material.We kere anyị imewe otu, na ihu ọma ọ bụla. ọnwa anyị ga-enwe anyị imewe styles maka ọbịa ịhọrọ.The ọhụrụ shaming ekwekọghị na-ewu ewu na clients.We ga-anọgide na-ebuli anyị management na innovate anyị ngwaahịa.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị etinyela nnukwu ego na akụrụngwa anyị kapeeti, na-emepụta ma na-emepụta kapeeti nke ụdị dị iche iche site n'onwe anyị, ka anyị wee nwekwuo ohere ịmepụta nke ngwaahịa. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwekwara ike ijikwa ọnụ ahịa ahụ n'onwe anyị, ka ndị ahịa nwee ike ịzụta ngwaahịa ndị nwere àgwà dị elu na ọnụ ala dị ala dị ka o kwere mee. Anyị gbakwunyere nnukwu ígwè obibi akwụkwọ, nke mere na ngwaahịa anyị na-aba ụba, ndị ọbịa nwere nhọrọ ndị ọzọ.
Kwa afọ, anyị na-aga ọtụtụ ihe ngosi ụlọ, dị ka Canton Fair, DOMOTEX na Automechanica, ma zute ndị ahịa ochie na ndị ahịa ọhụrụ iji kparịta iwu ma lelee ọdịnihu.
Viair ngwaahịa, elu mma, akwụkwọ akụkọ imewe.Viair ndị mmadụ, na-anụ ọkụ n'obi na ọkachamara. Uwe ụgbọ ala na akwa ọnụ ụzọ, Viair bụ nhọrọ ọkachamara gị.
Oge nzipu: 13-09-21
130th Canton ngosi
Oge elekere 24 n'ịntanetị